“အကြင်နာ လူသတ်သမား” များ မဖြစ်စေဖို့ ဒီစာလေးကို ဖတ်ပါ
15/07/2019 KPST 0
“အကြင်နာ လူသတ်သမား” များ မဖြစ်စေဖို့ ဒီစာလေးကို ဖတ်ပါ လူနာပို့ပြီး ပြန်အလာ လမ်းဆုံတစ်ခုမှာ ခေတ္တကားရပ်နားနေစဉ် ကြားနေကြအသံတစ်သံ ကျယ်ကျယ်လောင်လောင်နဲ့ နားထဲဖြက်ဝင်ရိုက်ခတ်လာတယ် လှည့်အကြည့် မှာ ခပ်ဝေးဝေးရောက်သွားတဲ့ အရေးပေါ်ကား တစ်စီး ။ ဟာ ကိုယ့်လူ ဒီလောက်တောင်မောင်းသွားရတာလား ။ ဘယ်အကြောင်းတွေများကြောင့် ဒီလောက် Continuous reading
ဦးနှောက် ကျန်းမာဖွံ့ဖြိုးရန် စားသင့်သော အစားအသောက်များ ။ ။
ဦးနှောက် ကျန်းမာဖွံ့ဖြိုးရန် စားသင့်သော အစားအသောက်များ ။ ။ လူ့ဦးနှောက်ဟာ နေ့စဉ် စားသုံးတဲ့ အစားအစာ ကယ်လိုရီရဲ့ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းကို ဆုပ်ယူ သုံးစွဲ ပါတယ် ။ဒါကြောင့် နေ့စဉ် ကိုယ်စားသောက်တဲ့ အစားအစာ တိုင်းဟာ မိမိ မှတ်ဉာဏ်နဲ့ ဦးနှောက် ကျန်းမာ Continuous reading
သံယောဇဉ်ကြိုး နှောင်တွယ်တိုးလည်း အသိ နောက်ကျလေသောအခါ…
သံယောဇဉ်ကြိုး နှောင်တွယ်တိုးလည်း အသိ နောက်ကျလေသောအခါ… ကောင်လေး တစ်ယောက် ဂိမ်းဆိုင်မှာ အလုပ်လုပ် နေတဲ့ ကောင်မလေး တစ်ယောက်ကို ကြိုက်မိသွားတယ် သူနေ့တိုင်း အဲဒီ ကောင်မလေးရှိ တဲ့ ဂိမ်းဆိုင်ကို သွားပြီး ဂိမ်းဆော့ လေ့ရှိတယ်တဖြည်းဖြည်း ချင်းနဲ့ နှစ်ယောက်သား တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် မျက်နှ Continuous reading
ပြောင်းဖူး အမွှေး အမျှင် တွေရဲ့ အံ့မခန်းဖွယ် အကျိုးကျေးဇူးများ ။ ။
ပြောင်းဖူး အမွှေး အမျှင် တွေရဲ့ အံ့မခန်းဖွယ် အကျိုးကျေးဇူးများ ။ ။ ပြောင်းဖူးကို ကျန်းမာရေးနဲ့ အထူး သင့်တော်တဲ့ အစားအစာ အဖြစ် သတ်မှတ် ထားပါ တယ် ။ ဒါပေမယ့် ပြောင်းဖူးပေါ် ဖုံးကာ ထားတဲ့ အမွေးအမျှင် တွေကို လည်း Continuous reading
ဗစ်တိုးရီးယား အမှုမှာ အမှန်တရားကဘာလဲ
15/07/2019 Thu Yay 0
ဗစ်တိုးရီးယား အမှုမှာ အမှန်တရားကဘာလဲ ကျွန်တော် မဟုတ်ပါဘူး အဲဒီ ကလေးလေးကိုလည်း မြင်တောင် မမြင်ဖူးပါဘူးဟု အင်တာဗျူးတွင် အောင်ကြီး ပြော မနက်မိုးလင်းသည်နှင့် ပြုမြဲအတိုင်း လမ်းထိပ်ဂျာနယ်ဆိုင်သွားပြီးသတင်းစာဝယ်သည်။ The Voice daily နှင့် 7day dailyသတင်းစာ ၂ စောင်ကို Continuous reading
ခုခေတ် လူငယ် တွေ အရွယ် မတိုင်မီ ဆံပင် ဖြူခြင်းအား ကာကွယ် နည်း ။ ။
ခုခေတ် လူငယ် တွေ အရွယ် မတိုင်မီ ဆံပင် ဖြူခြင်းအား ကာကွယ် နည်း ။ ။ အရွယ် မတိုင်ခင် ဆံပင်ဖြူခြင်း ဟာ အခုနောက်ပိုင်း လူငယ် တွေမှာ တွေ့ရများ လာတဲ့ ပြဿနာတခု ဖြစ်ပြီး ဒါဟာ မျိုးရိုး ဗီဇနဲ့ Continuous reading
ဒီလိုလူတွေ ခြင်ပိုကိုက်တယ် မိုးရာသီရောက်ပြီဆိုတော့ ခြင်ပိုကိုက်လာတယ်။ ဒါပေမယ့် တချို့က ခြင် သိပ်အကိုက်မခံရပေမယ့် တချို့ကျတော့ ခြင် ပိုကိုက်ခံရတယ်။ အဲဒီအပေါ် ရှေးလူကြီးတွေက မင်းက ခြင်စော်နံနေတာကိုးလို့ ပြောကြတယ်။ ၂၀၁၂ က ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ သုတေသန စစ်တမ်းအရခြင်ပိုကိုက်ခံရစေတဲ့ အချက် ၅ Continuous reading
သက်ငယ် မုဒိမ်းကောင်များ ဆေးထိုး၍ သင်းကွပ်စေထောင်ကလွတ်သော်လည်း စောင့်ကြည့်ခံရမယ့် ဥပဒေ ယူကရိန်းတွင် ထုတ်ပြန်
သက်ငယ် မုဒိမ်းကောင်များ ဆေးထိုး၍ သင်းကွပ်စေထောင်ကလွတ်သော်လည်း စောင့်ကြည့်ခံရမယ့် ဥပဒေ ယူကရိန်းတွင် ထုတ်ပြန် နှစ်စဉ် သက်ငယ် မုဒိမ်းမှု ထောင်ချီဖြစ်နေတဲ့ အတွက်ကြောင့်ယူကရိန်း တရားသူကြီးချုပ်က ဥပဒေကဲ့သို့အာဏာတည်သော အမိန့်တစ်ခုကို ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ သက်ငယ် မုဒိမ်းကောင်ကိုထောင်ထဲကို မပို့ခင် #လိင်စိတ်လျော့ကျစေတဲ့ဆေး ထိုး၊သင်းကွပ်ပြီး ယောက်ျား မဟုတ် Continuous reading
အသက်ကြီးတဲ့ အချိန်ထိ အရိုးတွေ သန်မာနေဖို့ လူတိုင်း လုပ်သင့်တဲ့ အချက် ( ၆ ) ချက် ။ . ။
အသက်ကြီးတဲ့ အချိန်ထိ အရိုးတွေ သန်မာနေဖို့ လူတိုင်း လုပ်သင့်တဲ့ အချက် ( ၆ ) ချက် ။ . ။ အသက် တွေ တစ်နှစ်ပြီး တစ်နှစ် ကြီးလာတဲ့ အလျောက် လူခန္ဓာ ကိုယ်ထဲက အရိုးတွေရဲ့ ကြံ့ခိုင် မှုကလည်း Continuous reading
ကလီယိုပါထရာရဲ့ ခေတ်မီနေဆဲ အလှအပ ထိန်းသိမ်းနည်း လျှို့ဝှက်ချက် ( ၅ ) ချက်
ကလီယိုပါထရာရဲ့ ခေတ်မီနေဆဲ အလှအပ ထိန်းသိမ်းနည်း လျှို့ဝှက်ချက် ( ၅ ) ချက် ကလီယိုပါထရာလို့ ဆိုလိုက်တာနဲ့ အင်အားကြီး ဘုရင် တွေက သူ့အလှအပ ရှေ့ ဒူးထောက်အရှုံးပေးရတဲ့ အလှဘုရင်မ ဆိုတာ တန်းပြီး သတိရ ကြမှာပါ… လှသလောက် မာန ကြီးတဲ့ Continuous reading
This Year : 89047
Total Hits : 1238749